I-"K.K. Franz Joseph" ikwindawo ephezulu kwi-manor yaseSzilágyi - I-Airbnb
I-"K.K. Franz Joseph" ikwindawo ephezulu kwi-manor yaseSzilágyi
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguOliver
UOliver unezimvo eziyi-45 zezinye iindawo.
Nantoni na ngaphandle kwesiqhelo, iSzilágyi manor yinto yokugqibela eseleyo kwibhotwe laseZwerbach elineminyaka engaphezu kwama-400. Emva kweminyaka emi-4 yokulungiswa ngononophelo, i-manor ngoku isebenza njengendawo yokuzola kunye nentlalontle kubathandi, izibini, izihlobo kunye nosapho lonke.
Ngamagumbi ethu ama-3, ngalinye linendawo yalo yokungena, izibini ezitshatileyo okanye iqela elincinane iintsapho / abahlobo banobumfihlo obukhulu. Le ndawo ibekwe eZwerbach, phakathi kweSalzburg, iVienna, iMelk kunye neÖtscher.
Umgangatho ophakamileyo wasebukhosini uchukumisa uyilo kunye nobunewunewu kwi-130 yeemitha zesikwere.
I-loft ibekwe kwicala elingasezantsi le-estate kwaye idlulela phezu kobude bonke besakhiwo. Umbono mkhulu, kwelinye icala legadi yenqaba enamasimi namadlelo kwaye kwelinye icala lentendelezo entle engaphakathi enomthi womngcunube onomtsalane. Ngokungena kwayo kunye nomnyango onzima wenqaba, uya ngqo kwindawo ephezulu.
Kwigumbi lokuhlala elibanzi kukho ibhedi ekhululekileyo enokuthi isetyenziswe njengebhedi yesofa.
Ithala leencwadi elikhulu lineencwadi ezinomdla kunye neemagazini zefashoni ezilungele ukuphumla.
Okanye ukuba uyawuthanda umculo, sineebhokisi zebhola ezinesitayile ukusuka kwi-70s enenkqubo elungileyo yomculo kuwe.
Indawo yokutyela inikezela ngesithuba sabantu aba-6 ubuncinane ukuba ungena nabahlobo okanye usapho.
Ikhitshi ibonelela ngayo yonke intuthuzelo, uya kufumana isiqithi sokupheka esinesinki kunye ne-dishwasher, oku kwakhona "itafile yebha" yokutya kwasekuseni, ukonwabela isiselo okanye ukuhlala kunye.
Indawo yokupheka ayishiyi nantoni na enqwenelekayo, kunye nesitovu se-induction yanamhlanje, i-extractor hood, i-oven, ikhabhinethi ye-apothecary, ifriji enkulu enefriji yefriji kunye nezixhobo ezipheleleyo zokupheka, akukho nto imile kwindlela ye-gourmet menu.
Kwi K.K. U-Sissi kunye noFranzl bayakukhathalela kwigumbi lokulala, kodwa ibhedi enkulu yebhokisi yenkosi iqinisekisa okona kulala kokulala.
Kwigumbi lokulala kukho iTV onokubukela ngayo imifanekiso yakho yeeholide okanye ubukele ifilimu enhle.
Isitofu sokutshisa iinkuni siya kukulungela kwigumbi lokulala ukusuka ekwindla, ngoko awukwazi ukufumana uthando ngakumbi!
Izindlu zangasese eziphangaleleyo zisecaleni kwegumbi lokulala.
Ubumnandi bokuhlamba kwishawari yabantu aba-2 kunye nentloko yeshawari yemvula ngamava ngokwawo.
Apha amanenekazi anesandla esiphezulu, indawo yethu yesitayile le ndawo inesipili esikhulu sokwenza kunye nesitayile, isitulo sokuphumla esitofotofo esinetafile ukuze kungabikho nto imisayo kwindlela yokujonga kakuhle.
Kwigadi enkulu ye-1500sqm yenqaba uya kufumana i-hammocks phakathi kwemithi yeziqhamo okanye ezinye iindawo zepikiniki. Kwimitha engama-square engama-60 ejonge ngasezantsi kukho i-pallet lounge, itafile yokutyela abantu abayi-6, i-grill apho unokuyonwabela iglasi yewayini ngokutshona kwelanga. Isidlo sakusasa simnandi kakhulu kwithafa kunye ne-twittering yeentaka kwilanga lasekuseni. Iziselo ezinxilisayo zengingqi kunye nezingezizo ezinxilisayo zinokufumaneka kwibhari yethu yokusebenzela, enesitayile njengoko ipholile kwaye ikumema ukuba uhlale.
Kwilali eselumelwaneni yaseRuprechtshofen, 3km kude, uya kufumana yonke into oyifunayo xa uthenga.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Zwerbach